Manisa ရထားဘူတာတွင်ခရီးသည်တင်လှည်းတွင်မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း (ဓာတ်ပုံပြခန်း) | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေManisa မီးအတွက်ခရီးသည်လှည်းရထားဘူတာထဲကကျဆင်းသွား (ဓာတ်ပုံပြခန်း) မီးမငြိမ်းခဲ့သည်
Manisa မီးအတွက်ခရီးသည်လှည်းရထားဘူတာထဲကကျဆင်းသွား (ဓာတ်ပုံပြခန်း) မီးမငြိမ်းခဲ့သည်
15 / 03 / 2013 အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
မီးထဲက Manisa အတွက်စွန့်ပစ်ခရီးသည် Wagon ရထားဘူတာမီးမငြိမ်းခဲ့သည်
Manisa ရထားလှည်းဝိသေသလက္ခဏာမှာတည်ရှိပါတယ်မသိသောလူမျိုးသည်အားဖြင့်ဘူတာမီး၌အခွအေနအားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 08.45 အဖြစ်နံနက်နာရီအတွင်းမီးဘူတာ Manisa TARIS အနီးအဟောင်းဂိုဒေါင်၏နောက်ကျောမှာသံလမ်းအပေါ်ပစ်ချခရီးသည်တင်ကားများအတွက်ထင်ရှား။ , id မီးတပ်မဟာလှည်းအမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်မီးရှို့ပစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိဖြစ်ရပ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ငြိမ်းအေး။ တစ်ဦးဖြူ၏အတွင်းပိုင်းအပြည့်အဝကော်ဖိနပ်၏မီးလောငျကားထဲတွင်သည်ထင်ရှားနိုင်ပါ။ ဒါဟာမီးပြီးခဲ့သည့်လကအတူတူပင်ဧရိယာ၌အာဂွန်လှည်းရှိကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
TCDD အရာရှိများ, နည်းပြသူတို့တစ်တွေခဏအဲဒီမှာအသုံးပြုနီးပါးပျင်းရိတွေ့ပြီးတော့သူတို့ပြန်လည်ဘို့စောင့်ဆိုင်းကပြောပါတယ်။ သူတို့ကသူကိုသူတို့နေဆဲဝင်ကပြောပါတယ်အရင်းအမြစ်အတွင်းရှိလှည်းများ၏တံခါးများပိတ်လိုက်သော်လည်းအပိုဒ်အာဏာပိုင်များသည်စဉ်ဆက်မပြတ်လှည်းစွဲထိခိုက်စေကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့သမိုင်းတွင် - နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀ Haydarpaşaမီးရထားဘူတာရုံခေါင်မိုးပေါ်တွင်မီးလောင်ခဲ့သည်
Adana Demir တောမီး Extinguishing ခဲ့သည်မှုတ်ဆေးမှတဆင့်သို့ပြောင်းရွှေ့
မီး Wagon ရထား Output
ကလူဦးသေဆုံးခဲ့သည် 36 ရထားဘူတာရုံမှာအိန္ဒိယ Stampeders (ဗီဒီယို-ဓာတ်ပုံပြခန်း)
ရထားက၎င်း၏ဘေးထွက် (- ဓာတ်ပုံပြခန်းဗီဒီယို) အပေါ်လွဲချော်ရပ်တန့်
အဆိုပါဥပဒေကြမ်း Haydarpasa ဘူတာရုံလုပ်သားများအတွက်နှစ်ခုမီးလောင်မှုအတွက်ဖြတ်ခဲ့သည်
တင်ဒါခေါ်ယူမှု - မီးရှာဖွေတွေ့ရှိချက်သတိပေးချက်နှင့်မီးသတ်စနစ်များတပ်ဆင်ခြင်း…
TCDD ဖော်ပြချက်: မြန်ရထားရထားမီးသတ်မဟုတ်ထဲက!
တစ်ဦးကမီး Turgutlu တစ်လှည်းရထားဘူတာရုံထဲကဖဲ့
မီးသတ်သင်တန်းနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုÇankırıပြောင်းလဲမည်စက်ရုံ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်ကျင်းပခဲ့သည်
Trabzon စီးတီး Pass ကို Access ကိုလမ်းမ TPC ဧပြီလ 02 2013 သစ်ကိုလေလံနောက်ဆုံးနေ့၏နူးညံ့သောအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ
နံပါတ် DE 35 24000 AIT Completed ယူနစ်အမျိုးအစားစက်ခေါင်းကို Maintenance လုပ်ငန်း (TÜLOMSAŞ) အေး